नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : कसले देख्छ यो पिँडा ? कसले सुन्छ उनिहरुको मर्म ?
कसले देख्छ यो पिँडा ? कसले सुन्छ उनिहरुको मर्म ?
चुनाबी घोषणा पत्रमा हावादारी सपना हरु कोर्न ब्यस्त छन नेता र दल हरु ।उनीहरुका छेडखानीका भासणहरु त दिनदिनै सुनिरहनु भएकै छ क्या रे ! कसले देख्छ यो पिँडा ? कसले सुन्छ उनिहरुको मर्म ? दिनहुँ यही तस्विर दोहोरिन्छ एयरपोर्टमा । अनी गाली खानुपर्छ यिनै तस्विरमा देखिनेहरुले । स्वदेशबाट केही कुर्लिन्छन - अर्काको देशमा भाँडा माझेर र चर्पी सफ गरेर बस्ने अनी नेपालका ठुला कुरा गर्ने भनेर ! यस्तै छ यहाँको चलन !!